Thailand weghachiri Phuket ka ọ gbaa ọgwụ mgbochi ndị njem si mba ọzọ na July 1
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -emegharị na Thailand » Thailand weghachiri Phuket ka ọ gbaa ọgwụ mgbochi ndị njem si mba ọzọ na July 1
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ okomoko • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Resorts • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -emegharị na Thailand • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
TAT Gọvanọ Yuthasak Supasorn
Preparedlọ oriri na ọ tourụ andụ na ebe ndị ọzọ na-eme njem nlegharị anya na mpaghara agwaetiti a kwadebere maka mgbasa ozi ịmaliteghachi na ihe ruru pasent 80 nke ndị bi na Phuket ga-enweta ọgwụ mgbochi ọrịa na COVID-19 site na Wednesde.
N'okpuru mmemme Phuket Sandbox, a ga-ahapụ ndị njem si mba ofesi ịgba ọgwụ mgbochi ịbanye na ịgagharị na agwaetiti ahụ n'enweghị nsogbu.
E mere atụmatụ na ndị njem nleta si mba ofesi 400 ruo 500 na-abịa Phuket na Tọzdee.
Nke a na-abịa dịka Thailand na-agba mbọ ịnwe oke ọnwa na-ebute ọrịa.
Gọvanọ nke Ndị njem nleta na-ahụ maka njegharị nke Thailand (TAT) kwuputara taa na alaeze ahụ adịla njikere ịmalite mkpọsa Sanduk Phuket na July 1 na imeghe agwaetiti ahụ maka ndị njem nleta si mba ọzọ.
A kwadebewo ụlọ oriri na ọ otherụ throughoutụ na ebe ndị ọzọ metụtara njem na mpaghara agwaetiti niile maka ịmaliteghachi ọpụpụ ebe ihe ruru pacenti 80 nke ndị bi na Phuket, gụnyere ndị goro ụgwọ na ụlọ nkwari akụ na ndị njem nleta, ga-agba ọgwụ mgbochi megide COVID-19 site na Wednesde, TAT Gọvanọ Yuthasak Supasorn kwuru.
E mere atụmatụ na ndị njem nleta si mba ọzọ 400 ruo 500 ga-abata Phuket na Thursday na a na-atụ anya na ọtụtụ ndị ọzọ ga-agbaso na ụbọchị ndị ọzọ, ka o kwuru.
N'okpuru mmemme Phuket Sandbox, a ga-ahapụ ndị njem si mba ọzọ ịbanye na ịgagharị na agwaetiti ahụ n'enweghị nsogbu, ọ bụrụhaala na a na-enye ha ọgwụ mgbochi zuru oke na nje ahụ ma nwalee adịghị mma. Ha nwere ike ịga njem n'akụkụ Thailand mgbe ha nọrọ n'agwaetiti ahụ abalị 14.
Nke a na-abịa dịka Thailand na-agba mbọ ịnwe oke ọnwa na-ebute ọrịa. Bọchị Mọnde, mba ahụ kwuru okwu 5,406 COVID-19, nke atọ kachasị elu kwa ụbọchị kemgbe ọrịa a malitere, na-ewelite ọnụ ọgụgụ zuru oke na ihe ruru 250,000.